Ama-Nails we-2021 Top Top 10. Yimuphi ozomkhetha? - Izindaba - Shanghai HUIZI digital
Ama-Nails we-2021 Top Top 10. Yimuphi ozomkhetha?
Isikhathi: 2021-05-20 Ukushaya: 105306
Ingxenye yesithathu ka-2021 isidlulile, namanje unyaka ongajwayelekile ngokungangabazeki asiyithandi inqubo yokukhetha ezindongeni ezigcwele i-nail polish kuma-nail salon, Futhi asincomi ukuthi silayishe inqwaba yamabhodlela ukuze sibe nokuningi ongakhetha kuzo ekhaya. Esikhundleni salokho, sikweluleka ukuthi kuklanywe isitikha se-gel isipikili esizodume kakhulu onyakeni, ngakho-ke iminwe yakho ingahlala isendleleni. Futhi ukwenza isikhathi sezinzipho sibe mnandi ngangokunokwenzeka.
"Njengethonsi elincane lamazolo, noma njengebhamu ezintanta emfuleni; Njengombani osofwini lwasehlobo, Noma isibani esibenyezelayo, inkohliso, umcabango noma iphupho."
Impilo iyinetha elisobala, esikulo sonke.I-manicure enemigqa akuyona isitayela esilula kuphela, kepha futhi imhlophe kakhulu, enambitheka ye-retro kanye nomqondo wesimanje wemfashini. I-manicure enemibala ekhazimulayo, futhi awudingi imithetho eminingi kakhulu, ungenza i-DIY ngokuya ngemibala oyithandayo, imigqa emincane noma emincane, ayithinti imfashini yayo, kepha iyabonakala kakhulu.
Sisebenzisa i-glitter ngemibala yensimbi, dala isimo esinokuthula.Okubuye kuhambisane nendlela yokuphila esheshayo yabantu besimanje.
4.ukugcwaliswa okuphezulu kwe-monochrome
Ngokukhanya nelanga lokushisa kwelanga;
Okumpunga, ukuzola nokubabazeka,
Njengombala oshiyelwe emhlabeni ngemuva komsindo,
Sonke sidinga ukwelashwa kombala okugqamile kakhulu!
Iphethini lezilwane, into abantu abayithandayo nabazondayo, ibilokhu ithandwa kusukela kusizukulwane sikamama.Ingwe iphrinta, iphethini lesikhumba senyoka, imfashini futhi iyakwazi, insimu yegesi esheshayo ivuleke ngokuphelele. Usebenzisa ibheyili endaweni encane, imvamisa awusoze wazama izakhi, ku-collocation yansuku zonke, imvamisa iba nenjabulo engalindelekile.
Uma kukhulunywa ngemabula, kufanele lijwayelwe yiwo wonke umuntu.Letshe elibala futhi eliqoshiwe lisetshenziswa kabanzi kwezobuciko zasekhaya.Imabula ye-Marble ayigcini nje ngokuklama okukhethekile, kepha futhi inentelezi enhle nenhle kuzwi elipholile, elingenakuphikiswa .
7.Imininingwane enqunu nemhlophe
Yisiphi isitayela se-manicure esiphephe kunazo zonke futhi esenza izinto eziningi, imfashini futhi isebenziseka ngezindlela eziningi? Lokho kumele kube umuthi wokugqoka onqunu! Awukho umbala ogqamile kuzipho enqunu, kepha ikhombisa ubumnene bomuntu lapho ubhekisisa. Umbala ongemuva ozolile nophanayo uzoveza ngokuzenzakalela ukubonakala okuhle. Ngasikhathi sinye, ngokunye okuvelele, kuzoba ntekenteke kakhulu.
Izakhi zasehlobo ezithandwayo zezimbali eziphukile, kunjalo, ngaphezu kwezembatho ekuhambeni kokuhlobisa izimbali eziphukile, i-manicure yomunwe ingakhomba nezimbali ezincane eziphukile, isitayela esihle, isitayela se-retro ephukile i-flower manicure, yikuphi okukuthandayo?
Amagama ayisihluthulelo athandeka, Huahua, U-rainbow nokugqama kombala. Esinezinga lokubukeka eliphakeme kakhulu isitayela sokuklama esinezimbali ezincane. Umbala uwonke unempilo, unezimbali ezilula. Imnandi futhi iyathandeka ngokuthinta i-retro.
Kusuka kwasendulo ngawo-1930
I-Pearl polish nge-flash ngawo-1950
Ngemuva kwalokho i-polish yesipikili yokuqala eyenziwe nguClairol ngama-60s.
isitayela sevintage ngaso sonke isikhathi singagcina indawo kubuciko be-nail.
Okwedlule: Izinsizakalo ze-HUIZI-UKUQESHWA KWEZINCOMO
Okulandelayo: Ibinjani imizwa yakho ekwindla?